मुख्यमन्त्रीकाे कारणले प्रदेश नं. ३ काे राजधानी ''काभ्रे'' ताेक्न ढिलाे भएकाे हाे : सांसद लक्ष्मण लम्साल | SaraKhabar.com
मुख्यमन्त्रीकाे कारणले प्रदेश नं. ३ काे राजधानी ''काभ्रे'' ताेक्न ढिलाे भएकाे हाे : सांसद लक्ष्मण लम्साल
काठमाडाैँ । गणतन्त्र नेपालकाे संघीय संरचनामा अहिले प्रदेशकाे नाम र राजधानीका लागि धेरै विवाद भइरहेकाे छ । ३ नं. प्रदेश पनि एक हाे । बाहिरी आवरणबाट देख्दा ३ नं. प्रदेशमा विवाद नदेखिएता पनि अान्तरिकरूपमा मुख्य मन्त्री र सांसद बीचमा ठुलै मतभेद रहेकाे पाएकाे छ । धेरैले प्रदेशकाे नाम नेवा ताम्सालीङ र राजधानी काभ्रे रहने सम्भावित अनुमान ठिक उल्टाे हुन लागेकाे छ ।
काभ्रेमा राजाधानी बनाउनुपर्ने बलियो मत हुँदाहुँदै पनि भौतिक संरचनाका कारण देखाउदै तत्कालका लागि अस्थाई रुपमा प्रदेश नं.३ को राजधानी हेटौंडामा बनाएकाे थियाे तर पछि सार्ने भनेपछि अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई सबैले स्वीकार गरे । तर अहिले प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले राजधानी हेटौंडाबाट नसर्ने बताउँदै आएका छन् ।
नागरिकलाई सजिलोका लागि भनेर देश एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा गयो । तर, प्रदेश ३ का बहुमत सांसदहरु राजधानी हेटौंडामा रहदा झन् दुःख पाइएको बताउँछन् । प्रदेश ३ को राजधानीका विषयमा युवा नेता तथा काभ्रेबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मण लम्सालको धारणा उहाँकै शब्दमा प्रस्तुत गरेका छौं ।
उहाँ भन्नुहुन्छ : सघीयतामा देश गएको छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् । त्यो मध्ये प्रदेश सरकार एक हो । सवाल रह्यो प्रदेश ३ को राजधानी । अहिले अस्थायी रुपमा हेटौंडाबाट काम भैरहेको छ । राजधानीजस्तो गंभिर विषय ढाँटेर, छलेर, नेतृत्वलाई प्रभावित पारेर हेटौंडा राख्न खोजिएको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीको मुख्य चासोको विषय जनताका मुद्दा हुनुपर्नेमा राजधानी हेटौंडा राख्नु बनेको मैले पाएको छु । उहाँले आफु मुख्यमन्त्री बनेकै राजधानी हेटौंडामा राख्न जस्तो गर्नु भएको छ ।
राजधानी उहाँको चासोको विषय हुनुहुँदैन । प्रदेश ३ को ५२ लाख जनताका विकास र प्रगतिको चासो बोक्नुपर्छ उहाँले । बोक्ने पनि त्यही मुद्दा हो । उहाँले ५२ लाख जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने राजधानी हेटौंडा पाइक पर्दैन भनेर उहाँ आफैले भन्नुपर्छ । दुई जिल्लालाई सुविधा दिने नाउँमा ११ जिल्लाको जनतालाई दु:ख दिनेगरी कुनामा राजधानी राख्नु भनेको पश्चगामी कुरा हो । अप्रगतिवादी कुरा हो । यस्तो कुरा गरेर मुख्यमन्त्रीले समग्र ३ नं। प्रदेशको नतृत्व गर्न सक्नुहुन्न । मेरो पहिलो कुरा यो हो ।
५२ लाख जनताको हित हुँदैन
मैले धेरै मिडियासँग पनि भनेको छु । हामी धेरै साथिहरुले संसदमा पनि बोलेका छौं । यो वा त्यो बाहानामा नेतृत्लाई समेत मुछेर राजधानीको विषय टुंगिने कुरा होइन। संवैधानीक कुरा के हो भने, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशका दुई तिहाइ सांसदले आफ्नो राजधानी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैलै यसलाई सहजतापूर्वक संसदमा छलफल गर्न दिनुपर्छ । यसलाई छलफलमा ल्याउने दायित्व प्रदेश तीनको नेतृत्व गरिरहेका सरकार र मुख्यमन्त्रीको हो । म अहिले पनि तपाईहरुको मिडियामार्फत् ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो वा त्यो वाहानामा नेतृत्वलाई प्रवावित पारेर, गलत सन्देश दिएर ५२ लाख जनताको हित हुँदैन र प्रदेश ३ सरकार सफल पनि हुँदैन । म त्यसो नगर्न अनुरोध गर्छु । हामीले पटक-पटक भनेका छौं । प्रदेश राजधानी हेटौंडामै राख्नुस् न दुई तिहाइ पुर्याएर । हामीलाई केहि आपत्ति छैन् । तर संसदमा प्रक्रियामै नलैजाने । भाग्न र छल्न खोज्ने कुराबाट कोहि सन्तुष्ट हुनसक्दैन ।
प्रदेश न ३ नेपालकाे मुख्य राजधानी भएकाे प्रदेश हो । यहाँ धेरै मानिसहरूको ध्यानाकर्ष भएका हुन्छन् । राजधानीकाे प्रदेश भएकाले यो प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई पनि सन्देश दिनुपर्छ । त्यसो भएका कारण प्रदेश तीनको राजधानी हेटौंडा काविल पनि छैन्, औचित्य पनि छैन्, आवश्यकता पनि छैन्, सामर्थ्य र सम्भाव्यता पनि छैन् । आवश्यकता, औचित्य, सामर्थ्य र सम्भाव्यताका हिसाबले र भविश्यका हिसाबलेसमेत काभ्रेभन्दा अर्को राजधानीका लागि उपयुक्त ठाउँ छैन् । म त्यहाँका प्रतिनिधिका हिसाबले भनिरहेको छैन् । यो संसदले बनाएको समितिले पनि राजधानीका लागि काभ्रे नै एक नम्बरमा सिफारिस गरेको छ । अन्य सांसदहरुले यहि कुरा बोलिरहनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीकाे राजधानी सपना
हेटौंडालाई औद्योगिक सहर बनाउने हो । त्यसमा कसैको विमति छैन् । तर प्रशासनिक सेन्टर बनाउँदा सबै जनतालाई पाइक पर्ने ठाउँमै हुनुपर्छ । राजधानीको अडेस लागेर मुख्य मन्त्रीले सफल हुन्छु भनेर सोच्नुभएको छ भने त्यो दिवा सपना मात्र हो । यहाँको सपना जनताको हितको विरुद्धमा छ । संविधान विरुद्ध छ । संघीयता र समृद्धिको विरोधमा छ । त्यसकारण कुनै छलकपट नगरी मुख्यमन्त्रीज्युले राजनधानीको विषय संसदमा लगोस् । त्यहाँ ५२ लाख जनताका विवेकी प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ ।
त्यहाँ आग्रह पूर्वाग्रहमा निर्णय हुनेवाला छैन् । त्यहाँ न्यायको निर्णय हुनेछ । विवेकको निर्णय हुनेछ । न्याय र विवेकको निर्णय गर्ने हो भने संसदलाई छेक्न पाइदैन । किनभने संसद सार्वभौम हो र जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्णय गर्ने ठाउँ हो । त्यहाँ कार्डेलिङ गर्ने काम गलत हो । राजधानीको विषय टेको लगाएर सफल हुन्छु भनेर हाम्रो मुख्यमन्त्री र सभामुखले सोच्नुभएको छ भने त्यो गलत विषय हो । यो राजनीतिक कुरा होइन । अहिलेको मुख्य सवाल राजधानी हेटौंडा नराख्ने भन्ने होइन, संसदमा मतदान प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । बहुमतले राजधानी हेटौंडा नै भएछ भने हामीलाई स्वीकार्य छ ।
राजधानीको विषय गंभिर विषय हो । हाम्रो प्रस्थानको विषय हो । यसको कारणले भोली जनताले संघीयतामाथि नै प्रश्न गर्छन् । देश असफलताको दिशा तर्फ जान्छ । त्यसकारण यो बाटोमा नजान म आग्रह गर्छु ।